Qeexitaanka Maareynta Ganacsiga: Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato - Circle Wealth
Bogga ugu weyn Qeexitaanka Maareynta Ganacsiga: Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
Isha sawirka: airoodion.com
Qofka qaata shaqada maareynta ganacsiga waa maamule ganacsi. Iyo maamule ganacsi ahaan, waxay ku wareejinayaan masuuliyada maaraynta hawlaha maamulka ee ganacsiga.
Shirkaddu waxay kaa filan kartaa inaad ka caawiso barnaamijkeeda suuq-geyneed. Ururku waxa kale oo laga yaabaa inuu ku damco inaad samayso falanqayn miisaaniyadeed si aad u ogaato siyaabo uu ururku u dhimi karo kharashaadka.
Waa in aad si hufan u fahanto suuqgeyn, xisaabaadka, iyo habraacyada maamulka kuwaas oo loogu yeero si loo socodsiiyo ganacsi.
Si aad si fiican u fahamto fikradan, waxaan u baahan doonaa inaan tixgelinno su'aalaha soo socda:
Waa maxay maamulka ganacsiga?
Muxuu maamulku qabtaa?
Maxaad u baranaysaa maamulka ganacsiga?
Waa maxay nidaamka maamulka ganacsiga?
Waa maxay xirfadaha maareynta ganacsiga?
Immisa hab maamul ayaa jira?
Waa Maxay Maareynta Ganacsiga?
Maareynta ganacsigu waa maaraynta isku-dubbaridka iyo abaabulka arrimaha ganacsiga.
Tan caadi ahaan waxaa ka mid ah soo saarista lacagta, agabka, iyo mishiinada, waxayna leedahay wax la xidhiidha hal-abuurnimada iyo suuq-gaynta labadaba.
Maaraynta waa in la qorsheeyo, habeeyo, toosiyo, oo la xakameeyo ilaha ganacsiga si ay u gaadhaan ujeedooyinka siyaasadda.
Waa maxay sababta loo baranayo Maamulka Ganacsiga?
Shakhsiyaadka hammiga u leh inay noqdaan hal-abuur ganacsi iyo hoggaamiyeyaal ganacsi, shahaado maaraynta ganacsigu waxay had iyo jeer ahayd doorasho caan ah.
Waxay ka dhigaysaa bixinta aqoonta akadeemiyadda iyo xirfadaha si loo sii wado fursadaha shaqo ee caalamiga ah waxayna kaa caawinaysaa inaad kobciso faham balaadhan oo ku saabsan ganacsiyada sidoo kale meelo gaar ah sida dhaqaalaha iyo ilaha aadanaha.
Laakiin haddii aadan weli 100% hubin haddii shahaadada maareynta ganacsiga ay adiga kuu tahay, halkan waxaa ah shan sababood oo ku qancin doona:
1. Kobcinta Xirfadaha Maareynta Muhiimka ah
Mid ka mid ah qodobbada ugu weyn ee laga hadlayo barashada shahaadada maareynta ganacsiga waa xirfadaha maaraynta ee ugu weyn ee kuu oggolaanaya inaad u noqoto hanti qiimo leh shirkad kasta.
Waxaad dhisi doontaa xirfad diyaar u ah inaad ka jawaabto caqabadaha iyo horumarka hadda ee ganacsiga iyo bulshada, taasoo ku siinaysa awood aad ku gaadho go'aamo maamul oo dhammaystiran oo tixgelinaya saamaynta anshaxa, bulshada, iyo dhaqaalaha.
Qaar ka mid ah xirfadahan maaraynta ganacsiga muhiimka ah waxaa ka mid ah:
fikirka xasaasiga ah
2. Fursadaha Shaqooyinka
Shakhsiyaadka ama ardayda doorta inay wax ku bartaan maamulka ganacsiga ee jaamacada ka qalin jabiyay iyagoo leh gabi ahaanba xarrago leh, xirfado la wareejin karo iyo aqoon ganacsi oo xoog leh, laba shay oo ay raadiyaan loo shaqeeyayaasha mustaqbalka.
Markaad u gudubto shahaadadaada maaraynta ganacsiga, waxaad hubaal ahaan qaabayn kartaa jihada xirfadaada, dooro goob ganacsi oo khaas ah oo ku xiisaysa, sida ganacsiga ama maaraynta ilaha dadka.
Waxay siiyaan ardayda ka qalin jabisay maareynta ganacsiga fursado shaqo oo kala duwan:
Tafaariiqda iyo iibinta
Hordhaca ganacsiga aduunka
Shahaadada maareynta ganacsiga waxay kaa caawin doontaa inaad hesho aqoon dhamaystiran iyo fahamka qaybaha muhiimka ah ee ganacsiga iyo maaraynta - sidoo kale waa hordhac heer sare ah oo ku saabsan dhulka ganacsiga haddii aadan waligaa hore u soo marin.
Waxay ka dhigtaa qodobbo ku saabsan fikradaha warshadaha, sida isbeddellada suuqa iyo warbixinnada warshadaha, kuwaas oo caddayn kara qiimo leh waxayna kugu dhiirigelin doonaan inaad adeegsato aragti tacliimeed xaaladaha ganacsi ee dhabta ah ee kaa caawin doona inaad si xooggan u bilawdo shaqadaada markaad qalinjabiso.
3. Noqo mid madax kuu ah
Ma aha oo kaliya inaad hesho fursado shaqo oo cajiib ah ka dib markaad qalinjabiso, laakiin sidoo kale waxaad yeelan doontaa nuxurka walxaha si aad u bilowdo ganacsi kuu gaar ah - waxa kaliya ee aad haysato waa fikrad ganacsi oo aad ku ordi karto.
Adigoo kobcinaya xirfadahaaga ganacsi iyo inaad awood u yeelatid inaad xaqiijiso ama bilowdo fikrado ganacsi oo aad yeelan karto, shahaadada maareynta ganacsiga waxay ku dhejineysaa koorsada si aad u noqoto maamulahaaga - xitaa waxaad la kulmi kartaa lammaanahaaga ganacsiga mustaqbalka ee jaamacadda.
Jaamacadaha qaarkood waxay bixiyaan arrimo khaas ah oo ka baxsan manhajka si ay u caawiyaan ganacsatada xiisaysa ee raba inay bilaabaan ganacsigooda.
Waxaad ka faa'iidaysan kartaa dhiirigelinta martida ku hadla ee maamula ganacsiyo malaayiin-rodol ah oo xitaa kor u qaada fikradahaaga ganacsi garsoorayaasha khabiirada ah iyada oo loo marayo, tusaale ahaan, tartanka fikradaha dhalaalaya ee sanadlaha ah ee Jaamacadda - waxaa jira £1,000 in lagu guuleysto.
4. Wax ka baro qaybo badan
Haddii aadan 100% hubin waxa aad rabtid in mustaqbalkaaga mustaqbalku noqdo, ama aad si fudud u rabto inaad yeelato aqoon ballaadhan, markaa shahaadada maaraynta ganacsigu waa doorasho cajiib ah.
Waxaad qaadan doontaa cashar dulmar ah oo ku saabsan shaqooyinka waaweyn ee ganacsiga kuwaas oo gacan ka geysta guusha ganacsiga ka dibna inta badan waxay ku takhasusi karaan aagga aad doorato. Kuwaas sida caadiga ah waxaa ka mid ah:
maaraynta kheyraadka dadka
Qaybaha kale ee laga yaabo inaad wax ka barato waxay noqon karaan la-talin, maareynta silsiladda sahayda ama xitaa ganacsiga caalamiga ah.
Markaad ugu dambeyntii ku qalinjabiso shahaadada maamulka ganacsiga, waxaad ku qalin jabineysaa arday dhan walba ah oo leh aqoonta kala duwan ee ganacsiga adduunka.
Muxuu Qabaa Maamulku?
Maareeyayaasha iyo agaasimayaasha waxay eegaan hindise oo go'aansadaan. Cabbirka maamulku wuxuu noqon karaa wax kasta oo ka yimaada shakhsi urur ilaa kumanaan maareeyayaal ah oo shirkado ah oo ka jira waddamo kala duwan.
Shirkadaha waaweyn, guddiga agaasimayaasha ayaa si sax ah u qeexaya siyaasadda ka dibna maamulaha guud ama madaxa fulinta ayaa fuliya.
Dadka qaar ayaa dareema habka ugu wanaagsan ee lagu baadho mustaqbalka shirkadda, qiimaha hadda wuxuu ku xiran yahay khibradda iyo heerka sare ee maamulayaasha.
Hadafka maareyntu waa in la isu keeno shakhsiyaad si ay u fuliyaan ujeedooyinka la rabo iyo ujeeddooyinka iyada oo la adeegsanayo kheyraadka la heli karo si wax ku ool ah iyo sidoo kale hab hufan.
Hawlaha maamulka waxaa ka mid ah:
Hogaaminta ama hogaaminta
Waxa kale oo ay ka mid yihiin wax-is-daba-marinta iyo hawlgelinta ilaha dhaqaalaha, khayraadka dabiiciga ah, kheyraadka aadanaha, iyo agabka tignoolajiyada. Maareynta waa muhiim si loo fududeeyo dadaalka midaysan ee lagu xaqiijinayo hadafyada shirkadda.
Waa maxay Nidaamka Maareynta Ganacsiga?
Nidaamka Maareynta Ganacsiga, ama BMS, waa qalab loo isticmaalo hirgelinta diblomaasiyadeed iyo qorshaynta istiraatijiyadeed ee hab-dhaqanka, hababka, siyaasadaha, habraaca, iyo hababka loo isticmaalo dejinta, hirgelinta, iyo horumarinta xeeladaha ganacsiga iyo qorshayaasha, iyo sidoo kale mid kasta arrimaha maamulka ee la xidhiidha.
Waxay sameeyaan qodobbo aasaas u ah labada go'aannada ganacsi ee diblomaasiyadeed, gaar ahaan hababka hadda jira, hawlaha, arrimaha, iyo hababka lagu daboolayo dhammaan ujeedooyinka ururku leeyahay oo isku dayaya inuu qanciyo rajada iyo baahiyaha macaamiisha.
Fikradda ugu weyn ee Nidaamka Maareynta Ganacsiga waa in la siiyo maamulka qalabka lagu kormeerayo, qorsheynayo, iyo xakameynta arrimahooda iyo cabbirka waxqabadka ganacsiga.
Waxay sidoo kale ujeedadoodu tahay habab horumarin joogto ah oo waxtar leh ee shirkadda. Nidaamkani wuxuu helaa mabaadi'da jiritaanka shirkadda wuxuuna si dhow ugu xiran yahay heerarka guusha ganacsiga.
Waxay leedahay dhowr heerar kala sareyn oo xalal ganacsi oo kala duwan kuwaaso tusinaya sida ururka faa'iidada diirada saaraya uu u fulin doono hawlo kala duwan, sida suuqgeyn, iibin, shaqaaleyn, iyo gadsi si uu u dhamaystiro hawsha si lagu qanco.
Waa maxay Xeeladaha Maareynta Ganacsiga?
Kooxda shaqaynaysa ee BMS waxay heshaa habka iyo hababka xeeladaysan ee fulinta qorshayaasha ganacsiga ee ku xidhan xeeladahooda ganacsi.
Waa inay keenaan xal xeeladaysan oo keliya aagga go'aaminta. Waa in ay hirgeliyaan iyaga oo ku salaynayo waqtiyada ku jira dukumeentiga istiraatiijiyadda maaraynta ganacsiga.
Waxayna dhisi karaan oo ay u qoondayn karaan waqtiyo ganacsi oo dheeraad ah oo ku saabsan dhaqankan fulinta xeeladaysan sidoo kale.
Waxay ku qeexaan Xeeladaha Maareynta Ganacsiga arrimo ama waxqabadyo raacaya shuruudaha ganacsiga ee lagu aqoonsaday siyaasadaha shirkadda. Waxay dhaqan geliyaan qorshayaal ganacsi iyo hawlo si ay u gaadhaan yoolalka ay mudnaanta u siiyeen.
Waxa kale oo jira habab iyo xeerar suulka kooxdan shaqaynaysa si ay ula yimaadaan qorshayaasha maaraynta ganacsiga. Tilmaamuhu waxay leeyihiin tilmaamo iyo tilmaamo wax ku ool ah si ay u muujiyaan sida dadka go'aansada ay u xakameyn karaan dhammaan xalalka xeeladaysan.
Waxay ku daraan hawlgallo iyo habab muujinaya sida kuwa wax qabta u helaan hawl maalmeedka iyo hawlahooda.
Kooxdani waxay sidoo kale ku hagaysaa shaqaalaha xagga dhamaystirka xalalka ganacsiga, sidoo kale si ay u aqoonsadaan qorshayaasha fulinta ee la socda xeeladaha maamulka.
Waa maxay Hababka Maamulka?
Waxaa jira noocyo kala duwan oo maamul oo caadi ah, kuwaas oo ay ku jiraan dimuqraadi, madaxbannaan, aabbanimo, iyo laissez-faire.
Waxay adeegsadaan habka maamulka dimuqraadiga ah marka shaqaaluhu ay bixin karaan jawaab celin ama fikrado ku saabsan go'aamada ganacsiga.
Maareynta si toos ah waxay u ogolaataa loo shaqeeyaha inuu noqdo qofka masuulka ka ah samaynta go'aan kasta oo uu ku hogaamiyo shirkadda iyada oo loo marayo jawiga ganacsiga. Waxay u arkaan maamulka aabbanimada inuu yahay jawiga shaqo ee ugu wanaagsan ee suurtogalka ah ee loo abuuray shaqaale kasta.
Laissez-faire xaqiiqdii waxa ku jira madax-banaanida shaqaalaha oo u ogolaata in go'aamo la gaadho iyada oo aanay jirin wax kormeer ah oo mulkiilaha ganacsigu leeyahay.
Maaraynta dhaqameed halkan waa kala sareynta shaqaale leh maamul hoose, dhexe, iyo heer sare. Nooca maareeyuhu wuxuu abuuraa filashooyinka yoolalka ay shaqaaluhu u baahan yihiin inay sameeyaan.
Shaqooyinka Maareynta Ganacsiga
Qaar ka mid ah shaqooyinka maareynta ganacsiga waa:
Maareeyaha Adeegyada Macmiilka
Maareeyaha Human Resource
Mushaharka Maamulka Ganacsiga
Warbixintii ugu dambeysay ee laga soo bilaabo Oct 4, 2021 ayaa sheegeysa in celceliska mushaharka sanadlaha ah ee Maareynta Ganacsiga ee Mareykanka uu yahay $58,286 sanadkii.
Tani waxay dhab ahaantii ku shaqaysaa qiyaastii $28.02 saacadii. Tani waxay u dhigantaa $1,121 todobaadkii ama $4,857 bishii.
Farqiga u dhexeeya Maamulka Ganacsiga ee Maamulka Ganacsiga
Shahaadada maamulka ganacsiga, tusaale ahaan, waxay kugu hoos galinaysaa fikrado ganacsi oo aasaasi ah, aragtiyaha, xeeladaha, iyo agabka, iyada oo seeska u dhigaysa xariiqda aad dooratay ee meherad furmi karta waddooyin shaqo oo kala duwan oo suurtagal ah.
Halka maamulka ganacsigu dhab ahaantii diiradda saarayo maamulka guud ee waaxda ganacsiga.
Halkeen ka heli karaa shahaadada maamulka ganacsiga?
Tani dhab ahaantii waxay ku xiran tahay - gebi ahaanba baahidaada gaarka ah iyo doorbidida jaamacadeed.
Maxay yihiin fursadaha horumarinta ee maamulaha ganacsiga?
Waxaa jira boos badan oo lagu hagaajin karo Maamule Ganacsi ahaan. Shirkad weyn, waxaad ka shaqayn kartaa jidkaaga, xitaa booska fulinta.
Maxay yihiin qaar ka mid ah xirfadaha kale ee maareynta ganacsiga?
Maareeyayaasha ganacsigu waxay bilaabaan ganacsi iyaga u gaar ah ama xitaa waxay noqdaan falanqeeye kaligood. Dhanka kale, falanqeeyuhu wuxuu kula taliyaa Maareeyayaasha kale ee Ganacsiga siyaabaha ay shirkadooda ama waaxdooda uga dhigi karaan kuwo hufan.
Sidee maamulayaasha ganacsigu u horumarin karaan shaqadooda?
Maareeyayaasha ganacsigu waxay wanaajin karaan xirfadahooda iyagoo balaadhinaya shabakadooda oo ay la xidhiidhaan xirfadlayaasha kale oo naftooda u suuq gayn karaan dhacdooyinka warshadaha.
Maamulaha Ganacsiga ma ka shaqayn karaa guriga?
Maareeyayaasha ganacsigu waxay ka shaqayn karaan guriga mararka qaarkood, taas oo ku xidhan shaqadooda hadda iyo siyaasadda ururka.
Maareynta ganacsigu waa hal edbin oo kala duwan, dariiq barnaamij shahaado ah oo kuu diyaarin kara warshado badan oo kala duwan.
Waxa jira fursado badan oo aanay kugula talin inaad ku dhaafto. Soo qaado khadka xirfadeed ee noocaas ah si aad u aragto weynaanta soo socota.
Ka dib markii aan $ 109.98 ku bixiyay AT&T TV Ultimate + rukunka TV -ga fiilada Internetka bil kasta, waxaan go'aansaday inaan socdo…
Qaado Kaararka Gaaska ee Bilaashka ah Maalmo Kooban | 15 Hababka ugu Fiican 2022
Iyadoo la tixgalinayo heerka uu qiimihii gaasku kor iyo hoos ugu kacayo, waxa laga yaabaa inaad la yaabto sida loo helo...